Amagama omntu oswelekileyo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ubomi bufutshane kumntu oye waphila ngamandla. UThixo wasinika ubomi sonke ukuze sikwazi ukonwaba, sijongane nezithintelo, uloyiko kwaye sonwabe ngamava ethu. Inxalenye yale miqobo, kwaye ngokuqinisekileyo eyona inkulu, ijongene nokusweleka komntu omthandayo. Ke ngoko, apha sikubonisa ezinye amazwi omfi, ukubeka loo nto siyithandayo.
1 Amagama omfi ayaviwa
2 Amanye amagama omfi
3 Iingcinga malunga nokuswelekelwa ngumntu omthandayo
4 Ubunzima bokulahleka
Amagama omfi ayaviwa
Kubo bonke ubomi bethu, uThixo, inkosi yethu kunye nomdali, usizisela uyolo, amava kunye nemiceli mngeni. Ngamanye amaxesha le mingeni isenza sizive soyiswe ngokupheleleyo, ngokungathi asinako ukuyoyisa. Kulapha xa siziva sikhathazekile, sikholelwa ukuba uThixo akahambi nathi, kodwa inyani kukuba uyayenza ngalo lonke ixesha.
Xa siziva sikhathazekile, silibale ukuba sixhaswa nguThixo kwaye akukho luvavanyo singenako ukuloyisa. Sinokude sicinge ukuba isiphendulele. Nangona kunjalo, oku akuyonyani, inyani kukuba akukho luvavanyo singenako ukuloyisa, kuba iNkosi yethu ihlala ikunye nathi ukujongana nabo.
Nangona kunjalo, siyaqonda ukuba kukho iimvavanyo ezinzima, kangangokuba umbuzo awuzukuzoyisa, kodwa kukufunda ukuhlala nabo, ukuziqhelanisa ukuze siqhubeke nendlela yethu. Olunye lolo vavanyo esingenako ukoyisa kodwa ekufuneka siphile nalo kukuphulukana nomntu esimthandayo. Yiba ngumama, utata, ubhuti, umhlobo, nokuba ngubani, kuyakuhlala kuluvavanyo olunzima ukuhlala nokungabikho kwakhe. Lo ngumceli mngeni wobomi bonke.
Ngaphandle kokuba lo mntu emke esiya kubukumkani bamazulu, siziva sibuhlungu ngenxa yokungabikho komzimba; kodwa akufuneki silibale ukuba yayiyeyomzimba kwaye, ngaphandle kwayo yonke into, iya kuhlala ikho nathi. Xa sithandazela aba bantu, xa sinikezela ngamagama ambalwa ukubanika imbeko, ukubabulela ngayo yonke into abasenzele yona, abasifundise yona, bayayimamela. Ke ngoko, kubalulekile ukuba sihlale sizama ukubahlonipha ngandlela thile, njengoko behlala ezintliziyweni zethu, kwaye, ngenye imini, siya kudibana nabo ezulwini.
Amanye amagama omfi
Ukuphulukana nomntu ngekhe kube lula, kodwa luxanduva lwethu ukulandela nokuthembela kuThixo, umdali wethu kunye nesikhokelo, xa sele siza kuyeka. Ukongeza, ukuqhubeka yinto enokuhlonipha umntu oshiyekileyo, kuba iimfundiso zabo ziyinxalenye yethu.
Yonke into, isenzo ngasinye, konke ukuziphatha kunye nesimo sengqondo esikukhumbulayo kuloo mntu simthandayo, zizixhobo ezixabisekileyo zokujongana nayo yonke imiceli mngeni esidibana nayo ebomini bethu. Xa sivakalelwa kukuba siphulukana nalawo malungu wethu ngokumka kwalonto, iintlungu zisenza silibale ukuba kusekho indawo efihlakeleyo eyenzileyo nayo yonke into eyenzileyo.
Ukuba sifuna ukumnika imbeko loo mntu, kufuneka simthandazele kwaye, kuba uya kuhlala esimamela, sinokuthetha amazwi ambalwa ukuze azi ukuba asimlibali, kwaye sihlala simthathela ingqalelo kwisigqibo ngasinye . Apha sibonisa ezinye amazwi omfi:
Mhlawumbi ubushiyile ubomi bam, kodwa hayi intliziyo yam.
Ndiyakulibala ukuba usuku lwakho lokuzalwa lwaluphi, xa sadibana, zonke izinto owandenzela zona, kodwa awuzange ube ngowona suku lubuhlungu ebomini bam: xa wawundishiya.
Ukufa kwakho kuyitshintshile inyani yam, kodwa ngakumbi inkumbulo engenakuphepheka yexesha esilichithe kunye.
Ndicinga nje ukuba ndinako ukuzithuthuzela, ukuba ngoku usezulwini, ndibukele.
Ukuvalelisa xa umthanda umntu akukhathazi, into ebuhlungu lixesha abaya kuhamba nalo ndlela yokuvalelisa.
Iingcinga malunga nokuswelekelwa ngumntu omthandayo
Sikunika apha ezinye zeengcinga malunga nokuhamba kwabathandekayo bethu, ezinokusinceda ukuba simelane ngcono nelahleko, evela kubabhali abaziwayo:
"Ukufa ayisiphangi abantu esibathandayo. Ngokuchasene noko, iwagcinela thina kwaye ayibonakali kwimemori yethu. Ubomi buziba kuthi amaxesha ngamaxesha kwaye ngokuqinisekileyo. " UMamerto Menapace.
“Ukuthanda kukulahla ukubanakho, nokuba sekufeni; ukunikezela ukubuya kwakhe, ukufumanisa ukuba usekhona, ethule engasasoyikisi, entlango ethi yamkele eyona nto ixabisekileyo sinayo, eyona nto ibalulekileyo yoko kuhlala kungekho nto inokwenzeka. " UJean-Yves Lelou.
“Akukho kufa, lukhona utshintsho. Kwelinye icala, abantu abalungileyo bakulindile ”. UFacundo Cabral.
"Ukufa akuzi nokuguga, kodwa kungabikho nto." UGabriel Garcia Marquez.
Ukuba umntu omthandayo uye wagula, nceda wenze umthandazo ngempilo kwaye vumela uThixo akuncede uphiliswe, ngokholo olukhulu.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ukuphulukana nomntu, nangasiphi na isizathu, kukothusa wonke umntu. Siyazi ukuba baya kuya ebukumkanini bamazulu, siyabathandazela, kodwa nangona kunjalo kunzima ukwamkela ukuba asizukuba naloo mzimba ukhethekileyo, ukumanga, ukuthetha naye, ukummamela, mbuze izinto.
Ebomini bethu, siqhele ukuthatha yonke into ngokungakhathali; Sikuthatha njengenyaniso yokuba abantu abayinxalenye yemihla yethu yemihla ngemihla baya kuhlala bekhona, sikuthatha njengenyaniso yokuba siza kuqhubeka silapha eMhlabeni. Akunjalo, siyazi, kodwa ngaphezulu kunokwenziwa ngokwesiko. Kungenxa yoko, ngamanye amaxesha, singabuxabisi ngokupheleleyo ubukho babo, iingcebiso zabo, iimfundiso zabo kwaye sigxeka ngokuqatha iziphene zabo. Siyalibala ubuncwane bayo, eyona nto ibaluleke kakhulu, zombini ubuhle kunye neziphene ziyayenza.
Umntu ngamnye oyinxalenye yobomi bethu ukhona unenjongo, basifundisa izinto ezahlukeneyo, siyazazi zonke iinkcukacha ngobuntu babo. Aba bantu, ekuhambeni kwexesha, amava aphilayo kunye nokwenza iinkumbulo kunye, kancinci kancinci baba yinxalenye yethu, yobume bethu, bomphefumlo wethu. Kungenxa yoko le nto xa ekugqibeleni kufuneka bemkile, siziva iintlungu, isizungu, ukungaqiniseki, kuba yinxalenye yethu esele imkile. Siziva sixhobile.
KukuThixo esifumana intuthuzelo kuye, siyambuza amandla kunye nobulumko bokujongana nemeko enzima ngolu hlobo, sithandazela loo mntu ukuba angene ebukumkanini bamazulu. Inyani yile yokuba ukusuka apho baya kusihoya. Sele sibonisile amazwi omfi ukuba ungazinikezela kolo lukhohlo, ngokuqinisekileyo uya kukumamela.
Khumbula ukuba, nangona ungafunda okuthile ngezi ngcinga kwaye kubuhlungu ukufunda okanye ukubiza amabinzana amangalisayo anikezelwe kwabo bashiyekileyo, ukuzinikezela okungcono kakhulu kukukwenza ngentliziyo yakho, ngeemvakalelo zakho, kulomntu uzokukhapha uvela ezulwini. kwaye ukuba, nokuba kudlule ixesha elide, uyakubona kwakhona ngenye imini.